Tovolahy mamon-drongony ? : olona sivy notsatohiny antsy, iray namoy ny ainy | NewsMada
Tovolahy mamon-drongony ? : olona sivy notsatohiny antsy, iray namoy ny ainy
Asa na mamon-drongony na saika hanao asan-jiolahy toy ny fahita andavanandro ity tovolahy iray, fa notsatohany antsy avy hatrany izay sendra nifanena taminy teny an-dalana. Vokany, olona valo naratra mafy, iray namoy ny ainy. Tany Toamasina no nitrangan’izany, ny faran’ny herinandro teo.
Tao amin’ny fokontany Androranga ao Toamasina no nitrangan’ity fihetsika feno herisetra miharo asan-jiolahy nataon’ity lehilahy iray ity. Hatairana ny an’ireo olona sendra mahita ny fihetsika nataony. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, nanomboka tao Androranga ka hatrany amin’ny fokontany Depot fahefatra amoron-dranomasina no nanaovan’ity lehilahy ity ny asa ratsiny. Vokany, olona miisa valo indray voatsatoka antsy tamin’io fotoana io. Tovolahy iray 20 taona, metisy karana namoy ny ainy satria nanohitra ity lehilahy mpampihorohoro ity kanjo voatsatoka antsy ihany ka maty tsy tra-drano.
Tsy afa-nanohatra ny olona manoloana ny fihetsik’ity lehilahy ity satria natahotra ny antsy teny am-pelatanany ka nijery fotsiny izay nataony, tao kosa ireo niaro tena sy niala haingana ny faritra nisy ity jiolahy ity.
Na teo aza anefa izany, nisy sahy nanenjika azy tamin’ireo olona, saingy tsy nahitam-bokany izany noho ny tahotra. Tsy hita popoka intsony anefa ilay nahavanon-doza rehefa avy nanao ny asa ratsiny. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ihany ny polisy ka nanao fikarohana azy teny amin’ny manodidina na ireo faritra mety ahitana azy.
Tovovavy 21 taona naolana sady novonoina…
Fa nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana koa ny tovovavy iray 21 taona tany Maroantsetra, ny volana septambra lasa teo. Voalazan’ny fampitam-baovao avy any an-toerana fa mpianatry ny Lycée iray any an-toerana ity hita faty nihosin-dra tao an-kianja fanaovam-baolina CAPJ, ny 6 septambra 2017 teo ity. Fantatra nandritra ny fizahan’ny dokotera fa niharan’ny fanolanana tambabe izy mialoha ny namonoana azy. Nandeha ny fikarohan’ny polisy ao Maroantsetra taorian’izay ka nahitam-bokany izany ny 6 oktobra 2017 teo tamin’ny fahasamborana mpanendaka iray vao 14 taona tao an-tsenan’i Maroantsetra. Nandritra ny fanadihadiana azy no nivoahan’ny marina rehefa fa misy ifandraisany tamin’ilay vonoan’olona ny 6 septambra 2017 teo izy sy ny namany. Nanondro ireo namany niray tsikombakomba taminy izy ka tratra tamin’izany ireo roa lahy hafa niaraka tamin’ny basy vita gasy. Nokaramain’ny havan’ilay tovovavy 15 tapitrisa Ar izy telo hamono ilay niharam-boina tamin’io fotoana io. Voalaza fa fialonana ny ambadik’izao vonoan’olona mahatsiravina izao. Mbola karohina kosa ity vehivavy atidoha nikotrika ny famonoana ity.